Vehivavy Ogandey Nihevitra ny Handeha Hampianatra Any Koety, Lasa Mpiasa An-Trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2017 2:23 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, русский, Nederlands, English
Vehivavy Ogandey mpampianatra i Prudence Nandaula, voafitaky ny fandraisana mpiasa ho any Koety. Nihevitra ny handeha hampianatra any, kanjo lasa mpiasa an-tranon'ny fianakaviana iray. Sary: Jasmine Garsd
Ity lahatsoratr'i Jasmine Garsd sy Andrea Crossan, ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 25 May 2017, ary naverina navoaka etoana noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Mihamaro ireo mpiasa aondrana. Araka ny ONU, maherin'ny 244 tapitrisa ireo olona miala ny firenena niaviany mba handeha hikatsaka fiainana tsaratsara kokoa. Ho an'ny vehivavy, midika fandehanana hiasa aminà toerana fitaizana ankizy sy ireo asa fanompoana hafa izany. Saingy tsy izay nosoniavin-dry zareo foana akory no azony avy eo.
Ao anatin'ity lahatsary ity, misy tovovavy Ogandey iray manao sarondoha manga, mangataka ny hilazàna amin'ny ray aman-dreniny. Lazainy fa marary izy ary tsy manana zo hody any aminy.
Tsy misy mahalàla ny toerana nandraketana ilay lahatsary – fa heverina ho tany aminà firenena arabo iray. Saingy niteraka hatezerana tany Ogandà. Na dia efa tsy mahagaga ny olona intsony aza. Rehefa mieritreritra ny fanandevozana, mety hieritreritra ireo varotra ara-tantara tao Afrika nankany Amerika. Saingy efa hatry ny fahagola ihany koa ireo fandefasana andevo nankany Afovoany -Atsinanana. Ary ankehitriny, miroborobo be ireny raharaha ireny.
Ogandà no firenena iray amin'ireo ahitàna vahoaka tanora indrindra eto an-tany. Manodidina ny 80 isanjaton'ny mponina no latsaky ny 30 taona. Tsy manana asa ny ankamaroany.
Nanana ny asany i Prudence Nandaula – mpampianatra tao Masaka, tanàna iray ao afovoan'i Ogandà. Nandray teo amin'ny 160 dolara teo izy isambolana, izay azo lazaina fa karama tsara raha ny fenitra ogandey no jerena ; ampy handoavana hofantrano, handefasana ny zanany lahy hianatra, ary nànana vehivavy mpiasa an-trano mihitsy aza i Prudence.
Kanefa, rehefa notolorana asanà mpampianatra any Koety izy, handraisana karama avo roa heny amin'ny azy, dia faly. “Tena nientanentana ery aho. Nihevitra aho fa rehefa tonga any Koety, angamba mba hahazo vola”, hoy ny fanazavàn'i Nandaula. “Ho afaka hanohana an-janako lahy.”.
Vehivavy naman'ny anadahiny no niteny taminy fa fotoana iray fanararaotra io. “Tenenina aminao ny hoe iantohana ny sakafo sy ny trano ipetrahanao. Afaka hanangona vola ianao, ary hiverina hody hanatanteraka zavatra goavana.” Ny ankabeazan'ireo ankizivavy angonina ao Ogandà dia ireo namany na havany no nanao izany”, hoy i Mayambala Wafrika, filohan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Justice for African Workers campaign (Fanentanana hitadiavana ny rariny ho an'ireo afrikàna mpiasa). Ambaran'i Wafrika fa izany matetika no mitranga : namana iray an'ny fianakaviana lavidavitra na angamba sipan'ny olom-pantatra iray no mikitika anao any anaty tambajotra sosialy.
Rehefa tonga tao Koety i Nandaula, tsy ela dia niharatsy ny tantara. Nogiazan'ilay fianakaviana nampiantrano azy ny pasipaorony ary notenenin'izy ireo izy hanomboka hanadio ny trano. Tamin'io fotoana io dia hoy i Nandaula hoe nirodana ny tontolony : nilatsaka avy any amin'ny toeran'ny mpampianatra izy ka lasa mpiasa an-trano any amin'ny firenena iray any ivelany. Tsy araka ny sitrapony.
“Dia hoy aho niteny irery, ” Andriamanitro oh!. Nefa dia nanana vehivavy mpanampy ahy aho tany an-trano. Ary ankehitriny aho miasa aty an-tranon'olonkafa.'”
Kanefa, naharitra volana vitsivitsy ihany izy. Saingy manao herisetra aminy amin'ny alàlan'ny teny mahery ilay fianakaviana. Lazain'i Nandaula fa nahita vehivavy hafa izy izay niasa tao, niharan'ny herisetra ara-bàtana. Nilaza tamin'ireo mpampiasa azy izy fa te-hody. Dia hoy izy ireo, ” Tsia, tsy tokony hisy resaka fodianao izany, tokony hanefa hatramin'ny farany ny fifanarahana ianao. ” Milaza fifanarahana iray izay tsy natao[ko] sonia akory ry zareo. “
Amin'ny ankapobeny, dia mandoa vola hatramin'ny 4.000 dolara aminà birao iray ny fianakaviana koetiana iray mba hahazo vehivavy mpiasa an-trano, fifanarahana hiasa mandritra ny taona roa. Mety mahazo hatramin'ny 500 dolara isaky ny ankizivavy ny mpanangona iray ao Ogandà. Samy nandray ny azy daholo ny rehetra, afa-tsy Nandaula. Raha ny marina, kely noho ny karamany tany an-tanindrazany no raisiny. Tafahitsoka izy. Na dia misy efa ho 100.000 aza ireo Ogandey miasa any Afovoany-Atsinanana, tsy misy afa-tsy tokana ny masoivoho: any Arabia Saodita. Tsy misy akory na dia kaonsily aza ao Koety ka hoe mba hahafahan'ireo Ogandey mahazo fanampiana.
“Azon-dry zareo ireny ankizivavy ireny ary entiny amin'ny fomba mahatsiravina toy ny fitondra andevo”, hoy i Wafrika manazava. Lazainy fa mitovy amin'ny fanombànana nataon'ireo mpivarotra andevo efa tamin'ny taonjato tany aloha tany no fitsàran'ireo birao mpanangona ireny ankizivavy ireny. “Misy olona iray tonga, dia mijery anao, manamarina ny halavana, ny lanja, ny lokon'ny hoditrao….manapaka hevitra raha toa ianao ka sahaza ny vola ho aloany aminao”.
Saingy raisina hiasa ireo vehivavy Ogandey satria mahay miteny anglisy ny ankamaroany, tsy toy ireo vehivavy avy amin'ny firenena hafa any atsimon'i Saharà.
Indray andro, nihodina ny rasa ho an'i Nandaula rehefa nanasa namana vitsivitsy hiaraka misakafo aminy ilay fianakaviana niasàny. Nentin'ireo namana ireo avy any ny mpanampin'izy ireo, vehivavy ogandey ihany koa. Ambaran'i Nandaula fa atao izay tsy hifampiresahan'ireo samy mpiasa an-trano. Saingy afaka nitafa izy ireo na izany aza, ary notantarain'i Nandaula tamin'io ramatoa io ny herisetra ara-pitenenana manjo azy.
Namporisihan'ilay ramatoa izy handositra. Toy ny nataony. Indray maraina, raha mbola natory ilay fianakaviana, niala tsimoramora tao an-trano i Nandaula.
Saingy tsy nifarana hatreto akory ny dia mahavariana nataony. Vantany vao nahadingana ny tokonana izy, foana koa ny fahazoandàlany hiasa. Nitolo-batana tany amin'ny polisy i Nandaula. Nandany telo herinandro tany am-ponja izy, niandry ny fandroahana azy. Nanam-bintana izy – ny ankizivavy sasany efa ho am-bolana maro no tavela ao. Vitan'ny olom-pantany iray ny naka ny pasipaoro tany am-pelatanan'ilay mpampiasa azy romotry ny hatezerana. Toy izany amin'ny ankapobeny no fandehan'ny raharaha, matetika no mila mirotsaka an-tsehatra ny masoivoho ogandey ao Arabia Saodita.
Nahavita nody tany Ogandà i Nandaula. Mampianatra indray izy izao. Mahavelona tsara ny tenany ara-dalàna. Saingy nihisatra ny toekarena ao Ogandà tato anatin'ny taona farany teo. Mifehy tena manao fitsitsiana ny rehetra. Milaza ny mety mbola hitsapa vintana any Afovoany-Atsinanana izy, saingy hitandrina mafy amin'izay fotoana izay. “Tsy afaka hiteny aho hoe tsy hiverina intsony. Raha manova rafitra ry zareo, mety hiverina any aho.”
Ilay mpikatroka mpiaro ny zo sivily, Wafrika, ihany koa dia te-hahita fiovàna – manomboka amin'ny fandraràna ny fandefasana mpiasa an-trano tsy ho any Afovoany-Atsinanana. Manana olona nahita fianarana ampy tsara azony aondrana ho solon'izy ireny i Ogandà, hoy izy. Ary tiany ny hahita ireo tovovavy toa an'i Prudence efa nampahafantarina mialoha ny mety hitranga alohan'ny hanekeny ny asa any ivelany. Saingy raha toa fanapahankevitr'izy ireo ny handeha any, tokony hisy biraonà kaonsily any amin'ireo firenena rehetra mandray azy ireny.
Tamin'ny taona lasa, ny valintenin'ny fanjakana tamin'ireo fiampangàna herisetra manjo ny vehivavy noho ny ataon'ireo mpampiasa azy ireo dia ny nandràra [fr] ireo vehivavy ogandey tsy handeha ho lasa mpiasa an-trano any Arabia Saodita.
Wafrika miteny fa tokony ihany koa hanana tahirimbola hiatrehana ny hamehana ny fanjakana, tahiry azon'ireo vehivavy ogandey iantorahana raha sanatria misedra olana amin'ny asany any ivelany any izy ireo. Fanamby iray goavana ho anà firenena iray mahantra toa an'i Ogandà. Saingy lazain'i Wafrika fa raha toa ny governmanta ogandey tsy miaro ireo zanany vavy, iza no hanao izany ?